Oniversite Fianarantsoa: rotaky ny mpianatra nivadika ho doro trasy fanimban-javatra | NewsMada
Oniversite Fianarantsoa: rotaky ny mpianatra nivadika ho doro trasy fanimban-javatra
Raikitra ny rotaka tao amin’ny oniversiten’i Fianarantsoa, omaly. Nifanafika ny samy mpianatra tao an-toerana. May vokatr’izany ny fakiolten’ny Degs. Potika ny ankamaroan’ny fotodrafitrasa, henjan-droa ny tady eo amin’ny samy mpianatra.
Nisy ny fitokonana nataon’ny mpinatra vokatr’ilay “circulaire” navoakan’ny minisiteran’ny fampianarana ambony ny tsy tokony hisian’ny “mémoire” sy ny “soutenance” intsony ho an’ny diplaoma “licence”.
Tsy niray hina tamin’ny fitokonana ny fakiolten’ny siansa satria mahatsiaro ho tsy voakasik’io “circulaire” io ka nanohy nianatra ihany. Noraisin’ny mpiantra sasany ho fivadiham-pitokisana sy tsy firaisana hina amin’ny tolona ny fanohizana ny fampianarana nataon’ny fakiolten’ny siansa ka izay no nahatonga ny fifandonana.
Notafihin’ny mpianatra avy ao amin’ny fakiolten’ny Degs, araka izany ireo mpianatra nianatra tao amin’ny fakiolten’ny siansa. Noravan’ny andiana mpianatra ny fianarana ary nandravarava entana sy nanakorontana izy ireo. Rava, araka izany ny fampianarana.
Tsy nanaiky izao fanakorontanana izao ny mpianatra avy amin’ny siansa ka nanao valifaty nirohotra nankeny amin’ny fakiolten’ny Degs indray ka avy hatrany dia nandoro ny trano fianaran’ny Degs. Raikitra ny fifandonana ka betsaka ireo entana simba sy fotodrafitrasa rava ao amin’ny oniversiten’ny Fianarantsoa.
“Hanohy hianatra izahay mpianatra ato amin’ny fakiolten’ny siansa na ho inona na ho inona ho tohin’ny raharaha”, hoy izy ireo. Malalaka ny safidy eo amin’ny fanehoan-kevitra sy ny fitokonana ka misafidy ny hinatra hatrany izy ireo. Hanohy ny fitokonana ihany koa ny mpianatra ssany etsy an-daniny.
Misokatra ny fanadihadiana
Manameloka izao fanapotehana ny fotodrafitrasa izao ny filohan’ny oniversiten’i Fianarantsoa. Hivory avy hatrany ny fiadidian’ny oniversite sy ny sojabe miaraka amin’ireo talen’ny departemanta rehetra handraisana ny fanapahan-kevitra sy hanokafana ny fanadihadiana mikasika izay tompon’andraikitra nahavita izao fanapotehana tao amin’ny oniversite izao.
Anisan’ny oniversite manana fotodrafitrasa tsara sy mirindra ny ao Fianarantsoa. Maro ireo mpianatra avy amin’ny faritra hafa tonga mandranto fianarana any noho io fotodrafitrasa tsara io. Oniversite lohany amin’ny fampiasana ny teknolojia moderina ihany koa i Fianarantsoa kanefa izao nopotehina tao anatin’ny indray mipi-maso izao.